Umbono woMgaqo-nkqubo wokuThuthukiswa kwezeMpilo
Ngokuchasene nombono ogqithiseleyo, abantu abanokwenene bayakholelwa ukuba kukho imfuneko yokuguqulwa kwezempilo. Ukuba kukho enye into apho amaRiphablikhi, iiDemokhrasi, iinkululeko, kunye ne-conservatives ziyavuma, kukuba inkqubo yokunakekelwa kwezempilo eMelika iphukile.
Ingxaki, ngoko, yinto ephihlileyo ngoku. Iibhalile zikholelwa ukuba yindlela kuphela yokulungisa inkqubo kukuba urhulumente asebenze, ngendlela iKhanada ne-United Kingdom ziqhuba ngayo iinkqubo zabo - ngokuthi "ngononophelo lwempilo jikelele." I-Conservatives, ngakolunye uhlangothi, ayivumelani nalo mbono kwaye iphikisa ukuba urhulumente wase-Amerika akakwazi ngokupheleleyo ukuthatha inzame enkulu, kwaye nokuba ngaba kunjalo, i-bureaucracy eyayiyo kuba yinto engenakulungelelanisa - njengenkqubo ezininzi zikaRhulumente.
I-Conservatives ayikho nje i-naysayers, nangona kunjalo. Isicwangciso sabo sithembeke ngakumbi kwiitoni kuba bakholelwa ukuba inkqubo yangoku iyakwazi ukulungiswa kunye neenkqubo zokulungisa izinto ezifana nokukhuthaza ukhuphiswano phakathi kwe-inshurensi yempilo kunye nenkampani yezobisi, ukuhlaziywa kwenkqubo yokuhlawula i-Medicare, ukubeka imilinganiselo ecacileyo yokunyamekela nokuphelisa inkqubo yenkundla ye-lottery ukukhupha umonakalo owenziwe ngumgwebi.
Iidemokhrasi kwiCapitol Hill ziye zajikeleza ingcamango yenkqubo yokunakekelwa kwempilo yabanye abahlawulileyo kunye neyo njengamanje esebenza eCanada naseUnited Kingdom.
I-Conservatives iphikisana nale ngcamango ngesizathu sokuba-kungakhathaliseki ukuba yimuphi umenzi wefilimu uMichael Moore uthi - iinkqubo zoononophelo lwezempilo zikarhulumente ziyaziwa ngokukhawuleza, zingasebenzi kwaye zibiza.
Ngaphambi kokuba akhethwe ngo-2008, uMongameli uBarack Obama wathembisa ukulondoloza "intsapho yaseMerika" eyi-$ 2,500 ngonyaka ngokuguqula imarike yomshuwalense kunye nokudala "utshintsho lwe-inshurensi yezempilo. Kwiinkcazelo zakhe zokushicilela, umongameli uthi icebo lika-Obama / iBaden liza kwenza "Inkonzo Yomshuwalense Wezempilo Kubantu Nama shishini - Akunjalo nje Ngomshuwalense kunye neNkampani Yezobisi."
Utshintsho lweNtshumo kaNtsholongwane yezeMpilo lubekwe ngokulandelelanayo emva kokucwangciswa kwezibonelelo zezempilo zeCongress.
Isicwangciso siya kuvumela abaqeshi ukuba banciphise ama-premium zabo ngokutshintsha abaninzi abasebenzi babo kwiprogram yurhulumente (ngokuqinisekileyo abasebenzi abangabambiswanga kunye nabanamanyano abanakho ukuthetha kulo mbandela nonke). Isicwangciso sokunakekelwa kwezempilo esitsha esiza kuthiwa siza kuthi sithathe iindleko zokunakekelwa kwempilo emitsha, ukubhubhisa urhulumente weburhulumenteni oye wanyusa.
Iindleko ezijikeleze imboni yononophelo lwempilo zihlonyelwe zizinto ezintathu zodwa, ezibini ezibandakanya ishishini lomshuwalense. Ngenxa yokuba (kwiimeko ezininzi) kwiindawo zokuhlala zentendelezo ezenza ukuba i-lottery iqwalasele abamangalelwa abafuna ukulimala, i-inshorensi yemfanelo yabanikezeli benkonzo yezempilo ayiphumelelwanga. Ukuba oogqirha kunye nabanye oogqirha bezobugqirha bafuna ukuqhubeka nokusebenza kunye nokuvelisa inzuzo, bahlala bengenakho ukhetho ngaphandle kokuhlawula iirhafu ezingaphezulu kweenkonzo zabo, ezithe zagqithiselwa kwinkampani yomshuwalense yabathengi. Iinkampani zomshuwalense, ziphakamisa ama-premiums kumthengi. Izigulane ze-inshorensi kunye nabathengi zimbini zecala kwiindleko eziphezulu zokunakekelwa kwezempilo, kodwa zombini zihambelana ngqo nento eyenzekayo kwiinkantolo zaseMelika.
Xa iinkampani zomshuwalense zabathengi zifumana iindleko zale nkonzo zindleko eziphezulu, kuyona nto inomdla ukufumana izizathu zokungahlawulisi okanye ukubuyisela i-insured. Kwiimeko ezininzi, ezi nkampani azikwazi ukuphepha ngokukhawuleza ukuhlawulwa (kuba amaninzi iinkonzo iinkonzo ziyimfuneko), ngoko ke umthengi kuphela kodwa umqeshi wabathengi ufumana ukunyuka kweeprojeyam zonyango zonyango.
Ngaphantsi: abagwebi be-activist, bafuna ukuqhuba ikhaya kwindawo ethile okanye benze umzekelo wodokotela othile, badibanise ukuqhuba iindleko ze-inshorensi yemfanelo, oko kuqhuba iindleko ze-inshorensi yezempilo.
Ngelishwa, ezi ngxaki kunye nenkqubo yokunakekelwa kwempilo zihlanganiswe yinkampani engaphandle kokulawula iyeza.
Xa umenzi weyeza uwenza ukufumanisa okubalulekileyo kwaye uvelise ngempumelelo iyeza elitsha kwiimarike zokunakekelwa kwempilo, imfuno esheshayo yokuba loo mayeza adala ukunyuka okungafaniyo kwiindleko. Akwanele ukuba aba bakhiqizi benze inzuzo, aba bavelisi kufuneka benze ukubulala (ngokoqobo, xa abathengi abathile bengakwazi ukufumana iyeza abayidingayo).
Kukho iipilisi ezibiza imali engama-100 e- nganye kwiimarike zentengiso, kodwa ixabiso elingaphantsi kwama-10 ngepilisi.
Xa iinkampani ze-inshorensi zifumana i-bill yezobisi ezibiza kakhulu, kusemgangathweni yabo ukuzama ukufumana indlela yokuphepha ukujongana neendleko.
Phakathi kweemali ezigqithisileyo zonyango, iimali ezixakekayo zemithi kunye ne-inshurensi yemali ye-inshurensi yempilo, abathengi kaninzi abanako ukufumana uncedo lwempilo abayidingayo.
Isidingo Sokuguqulwa kweTort
Iyona nto ephambili ekulweni nemali yokunakekelwa kwempilo ngumonakalo omkhulu wemingcipheko eyenziwa ngabagwebi be-activist imihla ngemihla kulo lonke ilizwe. Siyabonga ngala mabhaso athatywayo, abagwebi abanethemba lokuphepha ukubonakala kwenkundla bashiywe kungekho nto enye ngaphandle kweendawo zokuhlala.
Ama-conservatives ayaqonda ukuba kumaxesha amaninzi kukho izikhalazo ezichasene nababoneleli abangaboni kakuhle, baxhaphaze okanye bahoxise unyango olufanelekileyo lomthengi.
Sonke siva iindaba ezibuhlungu malunga noogqirha abadibanisa izigulane, ukushiya izitsha ngaphakathi kwezigulane zokuhlinzwa, okanye wenze i-misdiagnosis.
Enye indlela yokuqinisekisa ukuba abachasi bafumana ubulungisa, ngelixa ukugcina iindleko zonyango zempilo ukuba zenzeke ngokufanelekileyo kukuhlakulela imilinganiselo ecacileyo yokunyamekela kwabo bonke oogqirha kufuneka bahlale, kwaye banike izigwebo ezicacileyo - ngendlela yokulimala ngokwemali - ngenxa yokuphulwa kwabo nemigangatho kunye nezinye iziphene.
Oku kunokubakala ngokunyanisekileyo njengombono wesigwebo esincinci esisigxina, kodwa asikho. Esikhundleni saloo nto, ibeka izigwebo eziphezulu zommandla, apho abagwebi banokumisela, kunye nezohlwayo eziphezulu ezinikezelwa ngeemeko ezibangelwa ukufa okungafanelekanga. Ngenxa yokugqithiswa kwesinye, esinye isigwebo siya kusebenza. Ezi khokelo zikwabanxusa abagwebi ukuba baqulunqe; efuna ababoneleli ukuba benze inkonzo ethile yoluntu okanye, kwimeko yamagqirha, umsebenzi we-pro-bono kwinqanaba elithile loluntu.
Okwangoku, i-lobbyists zomthetho zenze iimfowuni zenze umonakalo ongenakwenzeka. Abagwebi banomdla wokufumana isigwebo esiphezulu, kuba iifizi zabo zihlala zipesenti yokuhlawulelwa okanye ukufumana ibhaso. Imirhumo esemthethweni yomthetho kufuneka yakhiwe nakweyiphi inkqubo ebeka iifowuni kwiimpawu zokugweba ukuqinisekisa ukuba indawo yokuhlala okanye ama-reward ayenayo ukuya kumaqela ahlosiweyo.
Iimali zegqwetha ezigqithiseleyo kunye neentetho ezilukhuni zenza okungakumbi ukuqhuba iindleko eziphezulu zempilo njengononophelo olonakalisayo olunikezwa ngabagwebi be-activist.
Abaninzi abanokuzikholisa bakholelwa kwiintsapho, ngabanye kunye namashishini kufuneka akwazi ukuthenga i-inshorensi yempilo lonke ukuphakamisa ukhuphiswano kwi-shishini labo kwaye anikezele ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha.
Ukongeza, abantu kufuneka bavumeleke ukuba bafumane i-inshorensi ngasese okanye ngemibutho abazikhethele yona: abaqeshi, iicawa, imibutho yobuchwepheshe okanye abanye. Imigaqo-nkqubo iya kuthoba ngokukhawuleza ikhefu phakathi komhlalaphantsi kunye nokufaneleka kwemithi kwaye igubungela iminyaka emininzi.
Ukhetho oluthe xa luninzi ekukhutshelweni luyingxenye enye yenkqubo yokunakekelwa kwempilo yemarike yamahhala. Omnye uvumela abathengi ukuba bathenge izinto zokwenza unyango. Oku kuya kukukhuthaza ukhuphiswano phakathi kwabanikezeli abaqhelekileyo kunye nabenza izigulane kwiziko lokunyamekela. Abanikezeli bemvume ukuba basebenzise lonke ilizwe baza kwakha iimarike zephondo zelizwe kwaye banike abathengi imbopheleleko enkulu kwiimfuno zabo zonyango.
Ukhuphiswano luqinisekisa ukuba uluntu lufundiswe kangcono malunga nokunakekelwa kwempilo kunye nonyango. Ixhobisa ababoneleli ukuba baveze ngakumbi malunga neziphumo zonyango, umgangatho wokunyamekela kunye neendleko zonyango.
Kwakhona kuthetha ixabiso lokuncintisana. Abanikezeli bekhwalithi abancinci bafumana ukhula, kuba - njengakwezinye iindawo kwezoqoqosho-mali-mali-bafumana intengo ye-inshurensi yokungasebenzi kwaye abanakho indlela yokunyusa amaxabiso abo. Ukuphuhlisa imilinganiselo kazwelonke yokunyamekela ukulinganisa nokurekhoda unyango kunye neziphumo ziqinisekisa ukuba ngababoneleli abaphezulu kuphela bahlala kwishishini.
Ukuguqulwa kwamanzi kwi-Medicare kuya kufuneka kuncedise inkqubo yokunakekelwa kwempilo yemarike yamahhala. Ngaphantsi kwesi simo, inkqubo yokuhlawula i-Medicare, ehlawulela ababoneleli ngenjongo yokukhusela, ukuxilongwa kunye nokunyamekela, kuya kufuneka ihlawulwe kwi-systemered tiered system, kunye nababoneleli abanakho ukuhlawulwa kwiimpazamo zonyango ezithintekayo okanye ukuphathwa kakubi.
Ukhuphiswano kwiimakethe zoshishino lwezobisi luza kunyanzelisa amaxabiso eziyobisi kunye nokwandisa ezinye iindlela ezinokusetyenziswa kweziyobisi ezincinci.
Iiprotokholi zokukhusela ezivumela ukuthengiswa kwakhona kweziyobisi ziya kugcina ukhuphiswano kwiinkampani zamachiza elinamandla, ngokunjalo.
Kuzo zonke iziganeko zokhuphiswano lwempilo, umboleki uya kukhuselwa ngokunyanzeliswa kokukhuselwa kombutho ngokuchaseneyo, izenzo zoshishino ezingalunganga kunye nezenzo zabathengi ezikhohlisayo.
Iidemokhrasi kwiNdlu yase-US kunye neSenate zilungiselela umthetho oza kubandakanya isicwangciso senqwelo-mali esinikezelwa nguRhulumente kwaye kufuneka ukuba abantu kunye namashishini afakwe okanye afumane izigwebo zemali.
Umbono ka-Obama we-National Health Insurance Exchange isinyathelo esondele ngakumbi kwinyani, ngelixa isizwe sisinyathelo esiseduze nonyango yoncedo lwezempilo.
Ukungena kukaRhulumente kwimarike yempilo ye-inshorensi kungabhekisela inhlekelele kubanini-mali bangegunyeni, okungeke bakwazi ukukhuphisana. Ukongeza iingxaki ezingaphezulu kwiinkampani zomshuwalense wezempilo yangasese izigunyaziso ezintsha zibandakanyiweyo kwilwayo eyokuthintela iinkampani zomshuwalense ukuba zikhanyele ukuxhaswa kwabantu ngabanye ngokusekelwe kwimbali yabo yezonyango.
Ngamanye amazwi, abaDemokhrasi bafuna ukudala inkqubo yomshuwalense wezempilo kawonkewonke okhuphisana namaqela abucala, kwaye ngexesha elifanayo, kwenza kube nzima kwiinkampani ezizimeleyo ukuba zihlale kwishishini.
I-Conservatives, okwangoku, ukwesaba ukuba umthetho ungakhokelela ekubanjweni kwenkampani yonakekelo lwempilo, oko kufezekisa umzekelo we-European socialism eMelika.
I-Moral Majority kwi-Political American
Uthini ukuziThumela ngaphandle?
I-Taliban: I-Extremist Sharia Law Movement
Iimagazini ezi-Top 10 ze-Conservative
I-Peninsula yaseSinayi eyayivela kwixesha elidlulileyo ukuya namhlanje
Kashmir Imbali kunye neNgaphambili
Yintoni i-Ziggurat kwaye yayakhiwa njani?
Iingoma eziphezulu zeR & B
Into onokuyilindela ukuyihlawula ukudlala i-Paintball
Impembelelo yeTyndall Inkcazo kunye nemizekelo
I-GRE General General Scores idibanisa njani neyokuQala izikolo ze-GRE?
I-Wolf Spiders, i-Family Lycosidae
IYugoslavia Ngokusemthethweni Iyaba iSerbia neMontenegro
Ubume Bemiba Yezopolitiko
Isingeniso sokwenza iNxaxheba kunye neGerunds
Imbali yeeNkomfa zeNHL kunye neeSahlulo
Injongo kaMaggie eToni Morrison 'Recitative'
Xa inyanga i-Scorpio - iTransit
8 I-Lip Dubs Eyoyikisayo Eya Kubeka Ubumnandi Kwi-Face Face
Uluhlu oluphezulu lwe-10 lwee-Latin Hits eziphambili kuma-1950